RW Rooble oo Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay bilashada bisha Barakeysan ee Ramadaan | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	RW Rooble oo Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay bilashada bisha Barakeysan ee Ramadaan
RW Rooble oo Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay bilashada bisha Barakeysan ee Ramadaan
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa Ummadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan iyo dhamaan Ummadda Muslimka ah ugu hambalyeeyay dhalashada bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa shacabka ka codsaday inay u gurmadaan walaalahood Soomaaliyeed, gaar ahaan agoonta iyo kuwa danta yarta ah ee aan waxba heysan.
“Waxaan Shacabka Soomaaliyeed iyo Ummadda Islaamka ugu hambalyeynayaa bilashada Bisha Barakeysan ee Ramadaan. Allaha na waafajiyo kheyrkeeda. Fadlan aan is caawinno oo si gaar ah u taakuleyno danyarta iyo agoonta una duceyno dalkeenna, Ramadaan Kariim”.ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa hay’adaha ammaanka faray inay xoojiyaan Nabadgelyada, ayna shacabka u fududeeyaan sidii ay u cibaadeysan lahaayeen, isagoo shacabka ka dalbaday dhankooda inay la shaqeeyaan dhamaan laamaha amniga.
RW Rooble oo Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay bilashada bisha Barakeysan ee Ramadaan was last modified: April 13th, 2021 by Admin
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay bilashada Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Mareykanka oo cabsi hor leh lasoo daristay kadib markii dalkaasi uu gaaray bahal dadka dila
Qarax xoogan oo caawa ka dhacay guri ku yaalla magaalada Kismaayo